दैनिक कति पानी पिउनु स्वास्थको लागि उपयुक्त हुन्छ ? - प्रश्नोत्तर - प्रकाशितः कार्तिक २५, २०७३ - नारी
दैनिक कति पानी पिउनु स्वास्थको लागि उपयुक्त हुन्छ ?
मोडल : रेश्मा तिम्लसिना (बुनु मैचा) तस्विर : नवराज वाग्ले
सिर्जना शर्मा, योग गुरु तथा ज्योतीष
पानी पिउने व्यक्ति कुन भेगमा बसेको छ त्यसअनुशार पानी पिउनु पर्छ । पहाड तथा काठमाडौंमा बस्नेहरूले दैनिक २ लिटर पानी पिउनु अति उत्तम हो भने तराई भेगमा बस्नेहरूले ३ लिटरसम्म पानी पिउनु पर्छ । आयुर्वेदिकअनुशार दैनिक ८ गिलास पानी एकपटक पिउँदा ८ घुट्कोका दरले पिउनु राम्रो मानिन्छ ।
कुन तरिकाले पानी पिउँदा राम्रो गर्छ ?
पानी कहिले पनि बोतल वा करुवाबाट घटघट पिउनु हुँदैंन । पानीलाई पनि खाना जस्तै विस्तारै पिउनु पर्छ । कहिले पनि उठेर पानी पिउनु हुँदैंन, बसेर आरामसंग पिउनु पर्छ ।
उठेर पानी पिउँदा के हुन्छ ?
उठेर पानी पिउँदा पानीले सिधै शरीरभित्रको हरेक ठाउँमा ठोकेर हानी गर्न सक्छ । बसेर सजिलैसंग पिउँदा सजिलै पच्छ र पानीले गर्नु पर्ने काम राम्रोसंग गर्छ ।
पानी धेरै पिउँदा शरीरमा के नराम्रो असर गर्छ ?
चाहिने भन्दा बढी पानी पिउनाले वाटर फ्याट लाग्छ । मानव शरीरमा हावा, पानी र खाना बराबरी चाहिन्छ तर पानीको मात्रा पेटभित्र धेरै पुग्दा पानी बोसोभित्र पुग्छ । जसले गर्दा शरीरमा बोसो नघट्ने र पानी मात्र खाए पनि कस्तो मोटाएको भन्नेहरू बढेका हुन् । यसरी वाटर फ्याट लाग्यो भने जति योग र एक्सरसाइज गरे पनि घट्न गार्‍हो हुन्छ ।
विहान उठ्ने वितिकै तातो पानी पिउनु पर्छ भन्ने चलन छ नि ?
विहान उठ्ने वितिकै पेटमा अग्नी जागृत भइराखेको हुन्छ, चिसो पानी पिउनासाथ अग्नी निभ्छ । त्यसैले उठ्ने वितिकै कि तातो पानी, कि बेड टि खानु राम्रो मानिन्छ ।
पानीका फाइदाहरू अरु केके छन् ?
हप्ताको २ पटक पहिलो पटक तातोपानीले मुख धुने अनि लगत्तै चिसो पानीले मुख धुन्दा अनुहारको छाला राम्रो हुन्छ । त्यस्तै विहान उठ्ने वितिकै मुखमा अट्ने जति पानी मुखमा हालेर अर्काे पानीले आँखामा छ्याप्दा खेरी आँखा रातो हुने, आँखाको कमजोरी, आँसु जम्ने, आँखा पोल्ने, हेर्दा विझ्याउने, निनद्रा लाए जस्तो भए राख्ने समस्यामा फाइदा गर्छ ।